राष्ट्रिय टिमका पुर्व कप्तान एवं क्रिकेटर पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् । मंगलबार बिहान आफ्नाे सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका हुन् । ‘सम्पूर्ण थप यता
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा निषेधआज्ञा साउन ३२ गते सम्म थप गरिएको छ । साउन २१ गतेसम्म कायम रहेकाे निषेधाज्ञा साउन ३२ गतेसम्म बढाउने निर्णय भएकाे हाे । निषेधाज्ञामा निजी दुईपांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन चलाउन पाउने यस अघिको थप यता
नवलपुर । पूर्वि नवलपरासीको गैंडाकोटका एक बृद्ध नारायणी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका छन् । गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. १ प्रतिभाटोलका रत्नभुवन श्रेष्ठ नारायणी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटले थप यता
नवलपुर । वैदेशिक रोजगारीको लागि नर्बे पठाउछु भन्दै करिब तीन दर्जन युवाहरूसंग करोडौं पैसा उठाएर नवलपरासी अर्खला वडा नं. ६ का बुद्ध आले मगर भनिने समीर आले मगर फरार भएका छन् । नर्वेमा राम्रो रेष्टुरेन्टमा महिनाको २ लाख सम्मको थप यता
नवलपुर । पूर्वि नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाको कावासोतीमा सुजुकी ब्राण्डको नयाँ स्कुटर आएको छ । आईतबार देखि बीएस ६ प्रविधिको सुजुकी एक्सेस स्कुटर कावासोती बजारमा आएको हो । कावासोतीको लागी सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक थप यता
साउन ७ देखि हराईरहेका अर्जुन अझै बेपत्ता, प्रहरी भन्छ खोजी कार्यजारी छ
नवलपुर । गत साउन ७ गते देखि हराईरहेका कावासोती-१३ का अर्जुन रिजाल अझै सम्म सम्पर्क विहिन छन् । करीव ११ दिन वितिसक्दा पनि उनकाे बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेकाे छैन । सुविसु ईन्टरनेट कावासोतीमा कार्यरत अर्जुन साउन ७ गते थप यता
नवलपुरमा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा गत आर्थिक वर्षमा पूंजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत भएको छ । संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्य पूंजीगत खर्च ४० प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय थप यता
नवलपुरकाे कावासाेतीमा नगदसहित जुवाडे पक्राउ
नवलपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले नगद सोह्र हजार छ सय पाँच रुपैया सहित ४ जना जुवाडेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिवार दिउसो कावासोती न.पा.–५ बस्ने पुर्ण बहादुर रावलको कुखुराको खोरमा जुवातास खेलिरहेको बेला एक बुक ताससहित थप यता
देवचुलीमा संक्रमितदर बढ्दाे, ७४ जनाकाे परिक्षण गर्दा २६ जना पाेजेटीभ
नवलपुर । देवचुली नगरपालीकामा काेराेना संक्रमितदर दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेकाे छ । आईतवार गरिएकाे परीक्षणमा २६ जनामा काेराेना पाेजेटीभ देखिएकाे हाे । देवचुली नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले दिएकाे जानकारी अनुसार दुम्कौली थप यता
नवलपुरमा सक्रिय संक्रमित ८५५, देवचुलीमा ३५ संक्रमित थपिए
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा कोभिड १९ का सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ सय ५५ पुगेको छ । विहीबार ९६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ५५ जना निको भएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका अनुसार विहीबार गैडाकोटमा १३ जना, देवचुलीमा ३५ थप यता